Ngomkhiqizo Obuyiselwe NguDredging Shenandoah River - Ellicott Dredges
Source: Ukucutshungulwa kwamakhemikhali
Ukuvikelwa koMfula iShenandoah kanye nokubuyiselwa kabusha kwe-zinc hydroxide eyigugu konke kutholakala ngu-Avtex Fibers, umkhiqizi omkhulu kunabo bonke ezweni we-rayon fibers, ngokusebenzisa i-remover sediment ephathekayo.
Sekuyiminyaka u-Avtex efake i-zinc hydroxide, okuwumphumela wenqubo yabo yokukhiqiza, ekuxazululeni amachibi azungeze lesi sitshalo. Amachibi okuzinza atholakala e-Avtex's Front Royal plant eVirginia ngokuzumayo aqala ukugcwala udaka nodaka - indle eyigugu - ngoba kwatholakala ukuthi uma i-zinc hydroxide ingabuyiswa ingacutshungulwa ibe yi-zinc sulfate ewusizo.
Ngemuva kokuphenya izindlela ezahlukahlukene zokubuyisa i-zinc emachibini, u-Avtex uthathe isinqumo sohlelo lokususa inzika ephathekayo engahlanza amachibi axazulula izimboni ngenkathi amachibi esahlala esebenza. Ngamahektare angaphezu kwama-85 we-zinc hydroxide emadanyini ayisikhombisa, ukuthwala komshini bekufanele.
Okokusebenza, okuhamba ngokuzigingqa ngokwentambo ekwekwe ogwini, kungasebenza emanzini angajulile njenge-21 inches. Udaka olukhethekile luzungeza ikhanda lomsiki, lufaka izinto ezimisiwe futhi lunciphise umswakama.
Izilawuli eziyinhloko ze-sediment remover zisebenza ngamakhompiyutha. Umsiki oqondile onobunikazi obekwe ekhanda le-boom, ufakwe imimese yokusika edonsa futhi isike impahla ngesenzo esifana nesikhafu. I-auir eyindilinga esekhanda lomsiki idonsa lokhu kwaziswa ekuphathweni kwepompo. Sisusa udaka ezinyaweni eziyisishiyagalolunye ububanzi esisikwe ekujuleni kwamamitha ayishumi nanhlanu. Ukuthambeka kwezinhlangothi zamachibi noma ukulungisa amachibi kungabekwa ngokulinganisa ikhanda le-auger kwesobunxele kuze kufike ku-45 degree angle.
Inikwe amandla yinjini edonsa kanzima ka-175 yama-horsepower, i-19,000 pound sediment remover ichaza indlela yayo ngokusebenzisa izinto eziqinile.
Esigabeni sokuqala sokusebenza okubandakanya ukukhipha kabusha imishini, imishini ephathekayo imayini futhi kudluliselwe ama-sludge ezindaweni ezigxile ngokuphelele eSitishini Sokubuyiselwa KweZinc. Imishini iphoqa lesi sludge ngepayipi lenyawo le-2000 ngesilinganiso se-1600 gpm esiteshini esikhulu sokubamba. Ukusuka ethangini i-sludge idonswa kubatshintshi bokushisa. I-sludge iyahlungwa kumshini wokucindezela omkhulu wokukhipha amanzi. Amaqebelengwane e-sludge avela emaphephandabeni agxotshwa nge-sulfuric acid ukuze aqede i-zinc. Ukucutshungulwa okwengeziwe kwekhekhe elithambile kususa i-iron ne-calcium ukwakha umkhiqizo wokugcina: isixazululo se-zinc sulfate.
Esigabeni sesibili noma sokulawulwa kokungcola kwesicelo, amayunithi asetshenziselwa ukusiza ukuvikela umfula iShenandoah. Amanzi angcolile ngesilinganiso sokugeleza kwamalitha angama-6000-8000 ngomzuzu, noma amalitha ayizigidi ezingama-8-12 ngomzuzu, noma amalitha ayizigidi ezingama-8-12 ngosuku, izinsuku ezingama-365 ngonyaka, kucutshungulwa esikhungweni esikhulu sokwelashwa esikhungweni se-Avtex. Amanzi angcolile aqala ukungathathi hlangothi futhi acaciswe. Amanzi ageleza esuka kulezo zinto zokucoca ezimbili aze afike ezimbizeni ezimbili zokupholisha ukuze axazulule noma yiluphi ugesi olunqanyuliwe olungasuswanga ekucaciseni.
Islayidi esiqongelela emgodini wokupholisha sisuswa ngabasusi besizinda. Ukusebenza komshini kubalulekile lapha, njengoba asusa ama-sludge kusuka ezimbizeni zokucolisisa ngaphandle kokuvusa uketshezi. Uma izinto zokukhamba zenziwe kabusha, zazichichima isitshalo sokwelapha sesibili.
Imiphumela emihle etholwe kuzinhlelo zokusebenza ezingenhla iholele ekutheni u-Avtex ahlole uhlelo lokususa udoti komunye ukusetshenziswa. Lolu phiko luzanywa njengendlela yokususa umlotha wempukane ekuxazululeni amachibi. Njengamanje, amachibi akhishwa ekusebenzeni ngokushintshana futhi uthuthuva lwendiza luhlanzwa kusetshenziswa amaloli okuhudula nokulahla. Ukonga okuncomekayo kungavela kuhlelo lokusebenza oluphumelelayo kuleli cala.
Ishicilelwe kabusha kusuka ku: Chemical Processing